Mamiratra ny fizahan-tany Nepal ao amin'ny Expo momba ny dia iraisam-pirenena Sichuan faha-5 (SCITE)
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Mamiratra ny fizahan-tany Nepal ao amin'ny Expo momba ny dia iraisam-pirenena Sichuan faha-5 (SCITE)
Nepal, Country of Honor ao amin'ny 5th Sichuan International Travel Expo (SCITE) 18 natao tany Leshan, Sina tamin'ny 6 ka hatramin'ny 9 sept 2018 dia nahazo kilometatra ara-pinoana sy fizahan-tany tsy mbola nisy toa azy satria toerana nahaterahan'i Lord Buddha.
Ny minisitry ny kolontsaina, fizahan-tany ary fiaramanidina sivily, Rabindra Prasad Adhikari no nitarika ny Delegasiona ofisialin'ny solombavambahoaka, ben'ny tanànan'ny Lumbini, Tansen ary Ramgram, NTB, Lumbini Devt Trust ary mpikambana ao amin'ny sehatra tsy miankina. Ny birao fizahan-tany any Nepal dia nandrindra ny hetsika manontolo tany Shina.
Niresaka tamin'ny lanonam-panokafana tao amin'ny SCITE izy ary nitsidika ny Pavilion Nepal ankoatry ny fanatontosana fihaonambe avo lenta miaraka amin'ny Governoran'i Sichuan, ny Ben'ny tanànan'i Leshan, ny lehiben'ny tempolin'i Dado Zen malaza ary ny tempolin'i Leshan Buddha hiresahana ny fiaraha-miasa sy ny fampiroboroboana. ny fizahantany ao amin'ny tsenan'i Shina tena mety.
Ny zava-nisongadina tamin'ny fitsidihana dia ny fanaovan-tsonia ny MOU teo amin'i Leshan, tranon'ny sarivongana Buddha lehibe indrindra eto an-tany sy Lumbini, Tansen ary Ramgram ho fampiroboroboana ny fizahantany Buddhist.
Androany, lanonana manokana no natokana hanomezana ny tany masina avy any Lumbini mankany amin'ny tranombakoka Leshan Buddha izay nanamasinana azy tamim-boninahitra lehibe.
Nosokafan'ny Andriamatoa Lila Mani Poudyel, ny Herinandron'ny Nepal, fampirantiana mandritra ny herinandro sy fivarotana asa-tànana Nepaleo izay misy tranoheva 50 mahery, zava-pisotro mahandro, fampirantiana sary, tanimanga velona ary dihy ara-kolontsaina natao tao Leshan ho an'ny vahoaka sinoa.
Ny minisitra Hon Adhikari sy ny ben'ny tanànan'i Leshan dia naneho ny fahavononany lehibe tamin'ny fanamafisana ny fifamatorana teo amin'i Leshan sy Lumbini ary izany dia tena handeha lavitra amin'ny fampiroboroboana ny fizahan-tany any Nepal any Nepal. Nandray anjara tamin'ny fivoriana B2B tao amin'ny SCITE ny NATTA. Manomboka amin'ny fanombohana ny fampiroboroboana ny fampielezan-kevitra amin'ny fitsidihana Kampana Nepal 2020 any Sina.
Florence, Helene ary Florence: Fandrahonana ny rivodoza lehibe rehetra ao amin'ny Ranomasimbe Atlantika
American Airlines ekipa ho an'ny mpandeha: tsy maintsy mikiaka anaty kitapo ianao